China Apricot vagadziri uye vanotengesa | Heritage
Iyo nyowani tsvuku apurikoti inobva kuBaoding guta reruwa rweHebei nekuda kwekunaka kwavo uye kutapira kuravira.
Ruvara rwebrown rwechibereko chakaibva rwunoshandukira kune runyoro rweorenji mushure mekusvirwa. Inokwezva zvikuru kuziso rako.
Heritage Chikafu chinoshandisa yemhando yepamusoro apricot nekutonhora kunotonhorera mune yakaderera-tembiricha manyuchi, chengetedza iyo acidity uye yakakosha inonhuwirira uye yakasarudzika flavour. Yakaputirwa nehupfu hwehuga zvishoma, zvinonaka uye zvisina kunamira.
Akareba kwenguva yakareba sei apricots?
Ziva kuti iwe unogona kuzvichengeta mupantry kana firiji kwemwedzi mitanhatu kusvika gumi nemiviri. Kana iwe ukavaisa chando, ivo vanokwanisa kukugarisa iwe kwemwedzi gumi nemaviri kusvika gumi neshanu. Chinhu chakakosha kuyeuka kuchengeta maapricot akaomeswa munzvimbo yakaoma, inotonhorera. Kuti uwedzere hupenyu hwesherufu hwakaomeswa mushure mekuvhura, uvaise muhomwe yepurasitiki inorema kana mune isina kuvharika, yakasungwa-yakasimbiswa.
Chimwe chidimbu chekuchengetera kurongedza maapurikoti mu'kushandira saizi 'usati waachengeta mufiriji. Paunoita izvi, iwe unoburitsa izvo zvaunoda nguva dzese. Izvi zvinobvumira maapurikoti ako akaomeswa kuti akurumidze kusvika patembiricha yemukamuri uye chengetedza zvese zvakasara zvemichero yako yakaomeswa kubva mukutorwa nekuchengetwa. Kuchengeta maapricots ega ega kuchaita shuwa kuti hausi kuramba uchivhara kana kuvhura mudziyo, uyo unogona kutendera mweya kupinda nekukurumidza kuita kwekuparadza nekuumba maitiro.
Maapurikoti ane hutano uye anonaka, uye maapurikoti matsva uye akaomeswa anobatsira zvakafanana. Paunochengeta maapurikoti akaomeswa, pane zvimwe zvinobatsira - nzira yekuomesa iri nyore uye zviri nyore kuchengeta.
Yedu Kambani yakapihwa China Yakaomeswa Zvibereko, Yakachengetedzwa Chibereko, Mazuva ano zvigadzirwa zvedu zvinotengesa kwese kwese kwekumba nekune dzimwe nyika nekutenda kwevakajairika uye vatsva vatengi rutsigiro. Isu tinopa chigadzirwa chemhando yepamusoro uye mutengo wemakwikwi, gamuchirai vatengi venguva dzose uye vatsva vanobatana nesu!
Pashure: Yero Peach
Yakapera mvura Apricot
Ovheni Akaomeswa Maapurikoti
Kudzorerazve maapurikoti akaomeswa
Kuchengeta Apricots Akaomeswa